गुगल एनालिटिक्समा रेफरल स्पाम कसरी रोक्न सकिन्छ - Semalt अभ्यास
यो सन्दर्भको स्प्यामको मुख्य पोइन्ट र यो कसरी Google एनालिटिक्समा देखिन्छ बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो भन्नु गलत हुनेछैन कि रेफरल स्पामले दुबै वेबमास्टरहरू र मार्केटरहरूको लागि धेरै समस्या सिर्जना गर्दछ, र जतिसक्दो चाँडो छुटकारा पाउनु पर्छ। यो सोशल मिडिया प्लेटफार्मका विभिन्न प्रकारबाट आउँदछ, वयस्क सामग्री वेबसाइटहरू, र साइटहरू जुन वैध देखिन्छन्, तपाईंलाई प्रशस्त पुरस्कार र पैसा प्रदान गर्दै।
रेफरल स्प्यामले तपाईको गुगल एनालिटिक्स रिपोर्ट छोटो अवधिमा फाँट्न सक्छ, र तपाइँले पहिचान गर्नुपर्दछ र यसलाई हटाउनु पर्छ ढिलो हुनु अघि र तपाइँको साइटको प्रदर्शन बिग्रन्छ। त्यसकारण, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक ओलिभर किंग आश्वासन दिन्छ कि रेफरल स्प्यामको ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र यससँग कसरी अगाडि बढ्ने भनेर वर्णन गर्दछ।
तपाईले किन रेफरल स्पामको ख्याल राख्नु हुन्छ?
यो प्रश्नको दुई भागमा जवाफ दिइनेछ: सर्वप्रथम, रेफरल स्प्यामले तपाईंको साइट र तपाईंको गुगल एनालिटिक्सको प्रदर्शनलाई सुस्त बनाउँदछ, त्यसैले यसको ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो, स्पामले तपाईंको फाईलहरू र डाटालाई दूषित गर्दछ, जसले अवैध रूपमा तपाईंको वेबसाईटहरूमा भ्रमण गर्ने मानवलाई अवलोकन गरिएको छ। रेफरल स्पामको समस्याग्रस्त स्रोतहरूले विभिन्न भ्रामक ढाँचाहरू सिर्जना गर्छन् जुन अनुचित निष्कर्षमा परिणाम दिन सक्छ। यदि तपाईंले आफ्नो वेबसाइट सेट अप गर्नुभयो र कुनै खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन बिना भारी ट्राफिक प्राप्त गर्न सुरु गर्नुभयो भने, त्यहाँ सम्भावनाहरू छन् कि तपाईं रेफरल स्पामको शिकार हुनुभयो। यहाँ सम्म कि भारी यात्रा साइटहरु रेफरल स्प्याम प्राप्त हुन सक्छ, तर ती दिन को सयौं ती हजारौं हिट को पहिचान गर्न सजिलो छैन। रेफरल स्प्यामले तपाईंको डाटालाई के गर्छ? ठिक छ, यसले तपाईंको वेबसाइटको बाउन्स रेट बढाउँछ, प्रदर्शन घट्छ, झूटा सत्रहरू बढाउँदछ, रेफरल ट्राफिक प्रदर्शनलाई ओझेल पार्छ र गोल रूपान्तरण र स्थान डाटा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ।
भूत र क्रलर रेफरल स्प्याम रोकिदै
२०१ 2017 एक बर्ष हो जब विभिन्न वेबमास्टरहरू र मार्केटरहरू कसरी भूत र क्र्रालर रेफरल स्पाम रोक्न सकिन्छ भनेर चिन्तित छन्। गुगलले कुनै नीति बनाएको छैन वा यस समस्याको समाधान प्रदान गरेको छैन, तर केही व्यक्तिहरूले गुगल एनालाइटिक्समा सेटिंग्स मिलाउन र अज्ञात वा शंकास्पद IP ठेगानाहरूलाई रोक्न सुझाव दिन्छन्।
स्पामर्स र ह्याकरहरू सँधै तपाईंको साइटको प्रदर्शन र यसको समग्र विश्वसनीयता रोक्न व्यस्त छन्। गुगलले रेफरल स्पामबाट छुटकारा पाउनको लागि केहि डीलहरू प्रदान गरिरहेको छ वा हुन सक्दैन ताकि तपाईं तिनीहरूलाई .htaccess फाइलहरू मार्फत ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, यो रेफरल स्पाम रोक्न र अज्ञात आईपी ठेगानाहरूलाई ठूलो हदमा रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमहरू मध्ये एक हो। मलाई यहाँ भन्न दिनुहोस् कि .htaccess फाईलहरू धेरै शक्तिशाली छन् र सर्वरहरूले कसरी व्यवहार गर्दछन् र समर्पित गर्छन् तपाईंको वेबसाइटमा क्यारेक्टरहरू निर्माण हुन्छन्। तपाईंको पूरा साइट लिईन्छ यदि रेफरल स्पाम प्रत्येक दिन आउँदैछ।
रेफरल स्प्यामबाट छुटकारा पाउनको लागि अर्को तरिका एनालिटिक्स फिल्टर हो। .Htaccess फाइलहरूले भविष्यका सत्रहरू तपाईंलाई रेफरल स्पामले आयात गर्नेबाट बचाउन सक्छ, तर यसले तपाईंको साइटको बाउन्स रेटमा कुनै प्रभाव छोड्दैन। यो जहाँ तपाईंलाई गुगल एनालिटिक्समा फिल्टरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक पर्दछ। एनालिटिक्स फिल्टरहरू सेट अप गर्न सजिलो छ र तपाईंको प्रणालीबाट हानिकारक फाइलहरू हटाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
गुगल एनालिटिक्सका केहि सुविधाहरू साथै धेरै WordPress प्लगइनहरू छन् जुन रेफरल स्पामबाट मुक्त हुन प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर माथिको विचारहरू सजिलैसँग जानको लागि छिटो छन् र उत्कृष्ट परिणामहरू प्रदान गर्दछ।